ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ | iMyanmarHouse.com
အရှေ့ဒဂုံစက်မူ့ဇုန်းတွင် ဂိုဒေါင် ငှားရန်ရှိသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19771994 အတွက် May Sky Real Esate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
196 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19771950 အတွက် May Sky Real Esate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အရှေ့ဒဂုံစက်မှု့ဇုန်တွင် မြေအကျယ်အဝန်း ( 2.80 Acre) #စက်ရုံအသစ် အငှား
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19766523 အတွက် Pearl Real Estate Group သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
👉 9/ အမှတ် (2) လမ်းမအနီး ၊ အရှေ့ဒဂုံဇုန်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19762304 အတွက် Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19759062 အတွက် May Sky Real Esate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🇲🇲🏠 ဂိုဒေါင်ကျယ်ကျယ်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ချင်သော လူကြီးမင်းများအတွက် ဈေးနှုန်းသင့် ဂိုဒေါင်လေးတစ်လုံး ငှားရန်ရှိသည်။ 🇲🇲🏠...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19745336 အတွက် Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🇲🇲🏠 မြေကျယ်ကျယ်ဈေးနှုန်းသင့် ဂိုဒေါင်တွေထဲမှာလည်း အခုပြောပြပေးမယ့် ဂိုဒေါင်လေးကိုလည်း မေ့မထားသင့်ပါဘူးနော်။ 🇲🇲🏠...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19738445 အတွက် Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🇲🇲🏠 မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေတို့ရေ…အကောင်းဆုံးဂိုဒေါင်တွေထဲက အငှားလစ်လပ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဂိုဒေါင်အလန်းလေးတစ်လုံးကိုရော ကြည့်ပြီးကြပြီလား? 🇲🇲🏠...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19736451 အတွက် Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်